Huawei Mate X: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Huawei Mate X: ofisialy ny finday avo lenta an'ny Huawei
Roa herinandro lasa izay Huawei dia nanamafy ny fisiany tao amin'ny MWC 2019, aiza izy ireo no hanana hetsika fampisehoana. Ny marika sinoa dia iray amin'ireo manintona ny hetsika any Barcelona. Araka ny vaovao maro no andrasana aminao, na dia misy fitaovana iray miteraka fahalianana manokana aza, izay ny maodeliny mivalona. Ny Huawei Mate X, izay natao ofisialy tamin'ny hetsika ihany.
Omaly vao naseho ny anaran'ny fitaovana, misaotra amin'ny afisy. Na dia tsy tamin'ity hetsika fampisehoana ity aza no nahafahanay nahafantatra antsipiriany manokana momba ny finday avoakan'ity marika ity. Efa fantatray ity Huawei Mate X ity, izay mitranga andro vitsivitsy aorian'ny Samsung Galaxy Fold.
Mazava nandritra ny volana maro fa ny finday avo lenta dia ho iray amin'ireo fironana tsara amin'ity taona ity. Ankehitriny, ao anatin'ny herinandro dia manana maodely roa manan-danja indrindra amin'ity sehatra ity isika. Ny zavatra mahaliana amin'ity Huawei Mate X ity dia ilay marika miloka amin'ny rafitra aforitra tsy mitovy amin'ny an'ny Samsung.
Ity dia zavatra mamela anao hanana fitaovana hafa noho ilay iray natolotry ny marika Koreana andro vitsy lasa izay. Inona koa, misongadina indrindra amin'ny hoe tena tsara, zavatra izay tsy isalasalana fa zava-bita manan-danja amin'ity karazana fitaovana ity. Ka mahita hevitra hafa isika, iray amin'ireo mahaliana indrindra amin'ny tranga rehetra.
1 Famaritana Huawei Mate X
2 Huawei Mate X: fanavaozana ho marika mampiavaka azy
Famaritana Huawei Mate X
Araka ny efa nampoizina, amin'ny lafiny teknika isika dia tampon'ny tampon'isa rehetra. Ny marika sinoa dia mamela antsika hanana fitaovana feno tokoa. Nandritra ny famelabelaran-kevitr'izy ireo dia te-hanasongadina ny fanavaozana amin'ny famolavolana izy ireo, saingy tsy te-hanao ambanin-javatra ireo famaritana mamela antsika izy io. Ka io dia fitambarana manan-danja ao amin'ity fitaovana ity. Ho fanampin'izay, araka ny efa nanamarihana ireo volana ireo, finday 5G voalohany ihany koa izy io. Ny antsipiriany feno dia:
Famaritana ara-teknika Huawei Mate X
modely Mate X
Operating System Android 9.0 Pie miaraka amin'ny EMUI 9 ho toy ny sosona
efijery 8 Inch miaraka amin'ny vahaolana 3120 x 1440 teboka (6.39 santimetatra aforitra ary 6.6 santimetatra aforitra)
processeur Kirin 980 miaraka amin'i Balong 5000 ho modem
Tahiry anatiny 512 GB
Fakan-tsary aoriana 40 MP zoro malalaka + 16 MP zoro ultra malalaka + telefaona 8 MP
Fakan-tsary aloha Tsy misy fakantsary eo aloha
Fitaovana hafa NFC Fingerprint sensor amin'ny sisiny
bateria 4.500 mAh miaraka amin'ny Huawei SuperCharge 55W
lafiny 11mm matevina mivalona (5.49mm mihorona)
vidiny 2299 euros
Huawei mahalala izay ataony amin'ity telefaona ity. Ny marika dia miditra amin'ny sehatry ny lamba aforitra miaraka amin'ity maodely ity, izay manana efijery 8-inch. Rehefa aforitra, lasa finday avo lenta 6,39-inch, miaraka amin'ny efijery faharoa ho fanohanana ao ambadiky ny fitaovana. Araka ny voalaza, ny hateviny dia lafiny iray lehibe amin'ny fitaovana. Manify tokoa ho an'ireo karazana telefaona ireo.
Rehefa misokatra, Ity Huawei Mate X ity dia mamela antsika efijery 8-inch. Eto amin'ity efijery ity dia tsy mahita naoty, lavaka na zavatra hafa isika. Noho izany, raha ampitaina tanteraka izy dia tsy manana fakantsary anoloana eo amin'ilay fitaovana. Tokony aforeto aloha ilay izy vao miverina amin'ilay maody antsoina hoe telefaona. Ny fakan-tsary any aoriana an'ny fitaovana dia ampiasaina amin'ireto selfies ireto ihany.
Huawei Mate X: fanavaozana ho marika mampiavaka azy
Tsy isalasalana fa ny rafitra famoritra dia zava-dehibe tao amin'ity smartphone ity. Manana singa hatramin'ny 100 izy ary mitaky fivoarana telo taona, hahazoana antoka fa afaka mivalona irery ilay fitaovana, tsy manimba ny efijery. Rehefa aforitra dia manana a 11 milimetatra matevina ary 5,49 milimetatra fotsiny no nivelatra. Tena tsara amin'ity lafiny ity, izay tsy isalasalana fa fanamby ho an'ny orinasa.
Ny efijery lehibe an'ny Huawei Mate X dia manome tombony maro. Ny marika dia manasongadina fa tena mora ny mamaky azy, ary koa mety tsara hijerena horonan-tsary ao. Tian'izy ireo koa ny manasongadina ny fampiharana ny famokarana amin'ity fampisehoana ity fitaovana ity. Ho fanampin'izay, omena ny mpampiasa fahaizana miasa amin'ny maody efijery fisarahana, izay mamela ny antsasaky ny efijery ampiasaina amin'ny efijery misaraka ho an'ny fampiharana sasany. Noho izany dia modely tsara ihany koa ny fiarahana miasa.
Etsy ankilany, izy no telefaona voalohany marika misy 5G. Ho an'ity, ampiasao ny maody Balong 5000 izay natombok'i Huawei herinandro vitsivitsy lasa izay. Amin'ny maha processeur azy dia mampiasa Kirin 980 izy, ilay matanjaka indrindra ananan'ilay orinasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny ananantsika ao amin'ny Mate 20 sy 20 Pro an'ny marika. Ity modem ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fitaovana haingana hafainganam-pandeha, hatramin'ny 4,6 Gbps fampidinana. Na dia hiankina amin'ny faritany aza izany. Saingy nilaza izany ny orinasa Huawei Mate X dia mamela anao misintona sarimihetsika 3GB ao anatin'ny 1 segondra fotsiny.
Izy io dia miaraka amin'ny batterie 4.500 mAh. Fa mety inona ny tena mahavariana dia ny sarany haingana, 55W. Io no fiampangana haingana be indrindra an-tsena amin'io lafiny io. Araka ny nolazain'ny orinasa tamin'ny famelabelarana azy, ny finday dia afaka ampangaina 85% ao anatin'ny 30 minitra fotsiny. Ity fiampangana haingana ity dia mitondra ny anarana Huawei SuperCharge.
Raha vantany vao fantatra ny antsipirian'ny Huawei Mate X, fotoana tokony hahalalana hoe rahoviana isika no afaka manantena ny hahatongavany ao amin'ny magazay, ankoatry ny vidiny. Raha nandiso fanantenana ny maro tamin'ny vidiny lafo ny fitaovan'ny Samsung dia mbola ho hita eo ihany ny marika sinoa
Amin'ity tranga ity dia azo antoka fa ho lehibe kokoa ho an'ny mpampiasa maro ny tsy ampoizina. Satria ny vidin'ity Huawei Mate X ity dia ambony noho izay hitantsika ao amin'ny fitaovana Samsung. Araka ny hita tamin'ny fampisehoana ny fitaovana dia ho avy miaraka amina kinova misy RAM 8 GB sy tahiry anatiny 512 GB, amin'ny vidiny 2.299 euro.
Tamin'ny famotsorana azy, antenaina handefa amin'ny magazay amin'ny tapaky ny taona ity. Tsy voafaritra ny daty manokana iray, mety ho amin'ny volana Jona. Saingy tsy maintsy miandry fanamafisana vitsivitsy avy amin'ny orinasa isika amin'ity lafiny ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Mate X: ofisialy ny finday avo lenta an'ny Huawei
Nokia 9 PureView: Ofisialy ny smartphone miaraka amina fakan-tsary miverina dimy
Ahoana ny fomba hijerena mivantana ny fampisehoana an'i Huawei ao amin'ny MWC19. Huawei Mate X?